ခြင်္သေ့ဟာ ဘယ်အစွမ်းတွေကြောင့် တောဘုရင်ဖြစ်နေရတာလဲ
21 Aug 2018 . 3:40 PM
“ငါ့မှာက သူများတွေလို အင်္ဂလိပ်စာလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မတတ်သေးဘူး၊ ဘွဲ့ဆိုလည်း မရခဲ့ဘူး၊ ဒီတစ်သက်တော့ အောင်မြင်မယ်မထင်တော့ပါဘူးကွာ” ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့အားနည်းချက်တွေကို ရင်ဖွင့်လာပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်တိုင်း၊ ဘွဲ့မရတိုင်း ဘဝမှာ လူချမ်းသာတစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားဗျာ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘဲနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ လူတွေအများကြီးရှိသလို ဘွဲ့မရဘဲနဲ့ (Bill Gates နဲ့ Mark Zuckerberg တို့လို) ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေလည်း တစ်ပုံတစ်ပင်ပါပဲ။
ကဲ . . ဒါဆို ဥပမာတစ်ခု ပေးကြည့်ရအောင်ဗျာ။ ဟိမဝန္တာတောနက်ကြီးထဲမှာ ကိုယ်ခန္ဓာအကြီးဆုံးသတ္တဝါကတော့ ဆင်ပါ။ အပြေးအမြန်ဆုံးသတ္တဝါကတော့ ကျားသစ်နော်။ အရပ်အရှည်ဆုံးသတ္တဝါကလည်း သစ်ကုလားအုတ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တောသုံးတန်၊ တောင်သုံးတန်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ သတ္တဝါက ဆင်လည်း မဟုတ်သလို၊ ကျားသစ်လည်း မဟုတ်ဖူးနော်။ အားလုံးသိတဲ့ တောဘုရင်က ခြင်္သေ့ပါပဲ။ ခြင်္သေ့ဟိန်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့အကောင်တွေ ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်ကြတယ်။
အံ့သြစရာ မကောင်းဘူးလားဗျာ။ ခြင်္သေ့က ဆင်လောက်လည်း အကောင်မကြီးသလို ကျားသစ်လောက်လည်း အပြေးမမြန်ပါဘူး။ သစ်ကုလားအုတ်လည်း အရပ်မြင့်ဖို့ နေနေသာသာ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ဟာ အရပ်လေးပေထက် မပိုပါဘူး။ ခြင်္သေ့မှာ သူများတွေရှိတဲ့ အားသာချက်တွေ မရှိဘဲနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ တောဘုရင်ဖြစ်နေတာလဲ။ ခြင်္သေ့ဟာ ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်ရှိတယ်။ သူ့ရှေ့မှာ ဖြတ်သွားတဲ့ ဘယ်သတ္တဝါမဆို အကောင်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ဂရုမစိုက်ဖူး၊ အကုန်လုံးဟာ သူ့သားကောင်ပဲ။ လမ်းလျှောက်တာကအစ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ လျှောက်တယ်၊ အားသွန်ခွန်စိုက် ရုန်းကန်တယ်။ ဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးပဲ ကြုံလာပါစေ၊ အကုန်လုံး ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတ္တိမျိုးရှိတယ်။
ကဲ . . တောဘုရင်ခြင်္သေ့ကို သင်ခန်းစာယူပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တွေလည်း ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲ။ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တာတွေ၊ ဘွဲ့ဒီဂရီအားသာချက်တွေ မရှိရင်လည်း နေပါစေတော့။ တကယ်တမ်းလိုအပ်တာက အနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ယုံကြည်ချက်တွေရယ်ပါ။ ကဲ . . ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိရင် အားလုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကဲ . . . နေ့တိုင်းအတွက် ခြင်္သေ့လို ယုံကြည်ချက်တွေ မွေးဖွားရအောင်လားဗျာ။